Open Document Format for Office Applications (OpenDocument သို.မဟုတ် ODF ဟုလဲခေါ်သည်) သည် အက်လက်ထရောနစ် စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများ၊ ချတ်ဇယားများ၊ စလိုက်ရှိုးများကို ကိုယ်စားပြုသည်. XML ကို အခြေခံထားသော ဖိုင်အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် Wikimedia Foundation မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းမှစ၍ MediaWiki တွင် ရှိသော အချက်အလက်များကို OpenDocument Format ဖြင်. export လုပ်ခွင်.ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ.သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenDocument&oldid=519031" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၂၀:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။